The Hacker Julian Assange anosungwa muLondon | Apg29
The Hacker Julian Assange anosungwa muLondon
Justice nguva kupedzisa kuita. The Hacker uye Wikilleaks muvambi Julian Assange asungwa muLondon nemapurisa British kubvira ipapo Ecuador abvisa hupoteri ake enyika.
Julian Assange ane makore manomwe akanga achigara ari wekuEcuador Embassy muLondon sezvo akapiwa hupoteri munyika muna 2012.
Kusungwa ndiyo rwaityisa iyo zvino zvinogona kusiya kuUnited States kuti Assange. Mune US, iye vaifungidzirwa mhosva rokuparadzira magwaro muchivande.
Akapomerwa chibharo muSweden
Julian Assange rave kupomerwa chibharo muSweden, asi kuferefeta yakavharwa muna 2017.
Maiva muna 2010 kuti Julian Assange akasungwa asipo pedyo dare Swedish pamusoro kunyumwira chibharo.
Akanga ari kuSweden kupa hurukuro, kusanganisira RO Castle mu Stockholm pamusoro dingindira "munhu akuvara yehondo rokutanga chokwadi." Nezvokumutswa kushanya Sweden akaudzwa Assange chibharo uye kushungurudzwa pavakadzi vaviri, chinhu kuti Express ndiye akatanga kuzivisa.
Assange akaramba mhosva asi vakaramba kuuya kuti anobvunzwa, nekuti wakatya kuti Sweden kuti wokumuisa kuUnited States. Muna December 2010 akasungwa nemapurisa British asi dare asarudza kumusunungura mari yechibatiso.
Muna June, makore maviri gare gare, iye aishanda enyika vatizire pa reEcuador embasi muLondon - apo iye aigara kubva.
Jesu anogadza vanhu vakasununguka
Chinhu chakanakisisa zvino kuna WikiLeaks muvambi Julian Assange kutizira Jesu. Rekupinda haana kushanda. Asi, yave iri mujeri wendarama, asi Jesu anogadza vanhu vakasununguka!
Vecka 30, onsdag 24 juli 2019 kl. 11:30